IDuteronomi 14 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ningoonyana kuYehova uThixouThixo wenu; ize ningazicenti, ningenzi mpandla phezu kwamehlo enu ngenxa yomfi;
2 ngokuba ningabantu abangcwele kuYehova uThixouThixo wenu; uYehova uninyulele ukuba nibe ngabantu abayinqobo kuye, ezizweni zonke eziphezu komhlaba.
7 Zezi zodwa eningayi kuzidla kwezetyisa umtyiso, nakwezithiwe gqiphu uphuphu: inkamelainkamela, nembila, nomvundla; ngokuba zetyisa umtyiso, ke aziluthe gqiphu uphuphu, ziziinqambi ke kuni;
8 nehagu, ngokuba iluthe gqiphu uphuphu, phofu ingetyisi, iyinqambi kuni. InyamaInyama yazo ize ningayidli, nesidumbu sazo ningasichukumisi.
11 Zonke iintakaiintaka ezihlambulukileyo nozidla.
20 Zonke iintakaiintaka ezihlambulukileyo ningazidla.
21 Ize ningayidli yonke into ezifeleyo; ungamnika owasemziniowasemzini osemasangweni akho, adle; ungathengisa ngayo kowolunye uhlanga; ngokuba ningabantu abangcwele kuYehova uThixouThixo wenu. Uze ungalipheki itakane ngobisi lonina.
23 udle phambi koYehova uThixouThixo wakho endaweni leyo aya kuyinyulela ukuhlalisa igamaigama lakhe kuyo, esishumini sengqolowa yakho, nesewayini yakho entsha, neseoli yakho, namazibulo eenkomo zakho, nawempahla yakho emfutshane; ukuze ufunde ukumoyika uYehova uThixouThixo wakho yonke imihla.
24 Xa indlelaindlela ithe yande kuwe, naxa uthe wakhohlwa ukusisa sona, ngokuba ikude kuwe indawoindawo leyo uYehova uThixouThixo wakho aya kuyinyulela ukulimisa kuyo igamaigama lakhe, naxa athe wakusikelela uYehova uThixouThixo wakho:
25 wosanana ngemali, uyibophe imaliimali esandleni sakho, uye endaweni leyo aya kuyinyula uYehova uThixouThixo wakho,
26 uyanane imaliimali ngeento zonke osukuba uzinqwenela umphefumloumphefumlo wakho, ngeenkomo, nangempahla emfutshane, nangewayini, nangesiselo esinamandla, nangeento zonke ozibizayo umphefumloumphefumlo wakho; udle khona phambi koYehova uThixouThixo wakho, uvuye wena nendlu yakho.
28 Ekupheleni kweminyaka emithathu, wokhupha sonke isishumiisishumi songeniselo lwakho lwaloo mnyaka, ulufumbe emasangweni akho;
29 eze umLevi, ngokuba engenasabelo nalifa ndawonye nawe, nowasemzini, nenkedama, nomhlolokazi osemasangweni akho, badle bahluthe; ukuze akusikelele uYehova uThixouThixo wakho emsebenzini wonke wesandla sakho owusebenzayo.